Fanehoan-kevitra tao amin’ny tambajotra sosialy miisa folo nandefa ny fanehoan-kevitry ny Amerikana Latina momba ny fanakorontanana tao amin’ny Capitol Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Nanjaka ny vazivazy sy ny schadenfreude
Voadika ny 04 Febroary 2021 8:45 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Nederlands, Português, عربي, English
Saripikan'ny lahatsoratra tao amin'ny Twitter mampiasa ny kisary mahatsikaiky malaza Bob l'Eponge.
Naneho hevitra tao amin'ny Twitter ireo Amerikana Latina rehefa nanafika ny Capitol ao Etazonia ny mpanohana ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump tamin'ny 6 Janoary. Ary ny vazivazy no be mpandefa indrindra tamin'izany.
Nanoratra tao amin'ny taratasim-baovaony mpivoaka isan'andro ilay mpanao gazety Jordana Timerman fa “nanjaka ny fihetseham-po Schadenfreude tany amin'ny firenena Amerikana Latina maro izay efa tsy vahiny amin'ny fanambaràna amerikana momba ny fikorontanana ara-politika ao amin'ny firenena.” Ny Schadenfreude dia midika hoe “fiainana fahafinaretana, fifaliana, na fahafaham-po avy amin'ny fahafantarana na ny fanatreha-maso ireo olana, ny tsy fahombiazana na fahafaham-baraka mahazo ny hafa.”
Namorona kisary mahatsikaiky ny mpitsikera hafa, nanasongadina ny fanesoana masiaka an'i Etazonia izay nanohana ny fanonganam-panjakana ara-tantara tany amin'ny faritra Amerikana Latina, niaina ny fikasan'i Trump ny fanonganam-panjakana tamin'ny alàlan'ny tenany araka ny filazan'ny olona sasany.
Nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny 6 Janoary, nanasa ireo mpanohana azy i Trump hanatevin-daharana ny fampielezan-kevitra notanterahiny nanomboka hatramin'ny nanamafisana ny valim-pifidianana ny volana Novambra 2020, nitady ny hanodina ny valim-pifidianana ary hanakana ny fanambarana, matetika amin'ny fomba ofisialy, ny valim-panadinana avy amin'ny Mpifidy Vaventy. Nanafika tao amin'ny Capitol tao anaty andian'olona nikisetrasetra ny mpanohana an'i Trump, ary dimy no maty. Mety ihatra amin'ity filoham-pirenena ity ankehitriny ny fitsipaham-pitokisana.
Indreto misy lahatsoratra tao amin'ny tambajotra sosialy miisa folo maneho ny fanehoan-kevitry ny Amerikana Latina an-tserasera.
Isaky ny misy krizy politika any Amerika Latina, toy ny nandosiran'ny filoham-pirenen'i Bolivia teo aloha Evo Morales ny volana Novambra 2019 tao anatin'ny korontana ara-politika dia matetika ireo mpaneho hevitra no mizara petrakevitra momba ny mety ho fandraisan'i Etazonia anjara amin'ny fanovana ny fitondrana:
Rehefa miditra Twitter ianao ary mahita fa manakorontana ny governemanta Amerikana i Etazonia fa tsy ny firenena Amerika Latina. #Capitol #Trump #Biden
Haingana ny fanehoan-kevitry ny filoha Amerikana voafidy Joe Biden nanoloana ny fanafihana ary niantso ireo mpanakorontana ho “mpampihorohoro an-trano”, sy namerina ny teny matetika voatonona amina fotoana toa izao— ”Tsy toy izao isika”:
Joe Biden: Tsy fanaontsika Amerika ny zava-mitranga ao amin'ny Capitol, tsy izany isika ?.
Tsy nahatsapa ny fangoraham-po ho an'ny mpiaray vodi-rindrina aminy avy ao avaratra mihitsy ry zareo Amerikana Latina noho ny fisafotofotoan'ny fifandraisan'i Amerika Latina amin'ny politikan'ny raharaham-bahiny Amerikana:
Vaovao: “Fanonganam-panjakana tany Etazonia, korontana tao amin'ny Capitol, fitakiana ny fitsipaham-pitokisana ho an'ny filoham-pirenena, miampanga ny tenany ho niditra an-tsokosoko ireo mpiray tsikombakomba adala, andro mainty ho an'ny demaokrasia”.
Nizara ny “angondrakitra” ahitana ny fitondrana niaina fanonganam-panjakana nataon'ny mpitondra tenany, izay ahitana an'i Etazonia ankehitriny i John Polga-Hecimovich, mpahay siansa politika:
Ny angondrakitra farany ahitana ny fikasana fanonganam-panjakana nataon'ny mpitondra tenany (1992-2021)
“Nisioka” an'i Etazonia tamin'ny alàlan'ny fanondroana marika Amerikana—voromahery—mahazatra sy ny fitsipika ara-panahy niandoha tany Azia ilay mpanakanto Haisiana sady mpanao gazety mpaka sary Fortune Edris:
Mila mahafantatra ilay vorona manana ny vavamby fa misy ny karma.
Nandray anjara tamin'ny Schadenfreude falifaly i Virginia mpikatroka feminista mafàna fo Salvadoreana:
Ry namako, inona no ilana ny fandraisana anjara politika vahiny taonjato roa raha tsy hampihomehezana antsika avy hatrany ?
Nanoratra hatsikana efa tranainy ilay mpisera Twitter avy any Amerika Afovoany:
Fa naninona no mbola tsy nisy fikasana fanonganam-panjakana tany Washington DC ?
Satria tsy misy masoivoho Amerikana any. “
Mila mieritreritra an'ity vazivazy taloha ity ry zareo.
Nilaza ny olona sasany fa nanjary tsy taitra intsony tamin'ny tranga tahaka izao ny firenena sasany toa an'i Venezoela, izay niaina ny “fanonganam-panjakana nataony manokana” tamin'ny fifidianana tamin'ny volana Martsa 2017 :
Amerikana: Nahoana ianareo no tsy taitra mijery ny vaovao anio ?
Nampitandrina ny mpampianatra iray any amin'ny Oniversite Breziliana Lola Aronovich fa mety misy olona iray manaraka akaiky ny zava-mitranga any Etazonia amin'ny endrika ratsy rehetra dia ny filoha Breziliana Bolsonaro:
Manam-pahaizana amin'ny fanonganam-panjakana any amin'ny firenen-kafa i Etazonia. Tsy tsara loatra rehefa miezaka manao izany ao amin'ny fireneny ny voasary lo sy ireo mpanohana ny mpanambony fotsy hoditra. Antsipiriany: Mandray an-tsoratra ny zava-drehetra ho an'ny 2022 i Bolsonaro.
Namely ny politikan'ny raharaham-bahiny Amerikana sy ny fitsabahany amin'ny fanafahana ireo firenena amin'ny fitondrana tsy demaokratika ilay mpamoaka lahatsoratra, Leví Kaique Ferreira:
Raha nahita ny nataon'i Etazonia tao Etazonia i Etazonia dia hanafika an'i Etazonia i Etazonia mba hanafaka an'i Etazonia amin'ny fangejana ara-pitondrana ao Etazonia.